Warbixin Hiraal Institute: Nidaamka canshuuraha iyo sida loo ilaaliyo miisaaniyadda al-Shabaab – Radio Daljir
Warbixin Hiraal Institute: Nidaamka canshuuraha iyo sida loo ilaaliyo miisaaniyadda al-Shabaab
Oktoobar 7, 2018 2:05 b 0
Warbixin ka soo baxday hay’adda Hiraal Institute ayaa lagu falaanqeeyey sida uruka al-Shabaab uu wax u canshuuro, mushaarka shaqaalaha al-Shabaab, kuwa Amniyaatka oo ayagu ugu mushaar badan iyo sida ay uga hawlgalaan gobolada dalka.
Warbixinta waxaa laga diyaariyey rag ka soo baxsaday al-Shabaab masuulna ka ahaa maamuulka miisaaniyadda iyo sakooyinka. Shay kasta oo laga beecmushtaro ha ahaato dukaan, gaari raaxo, mid ganacsi ama xammuul, taraak, iyo riigagga ceelasha qoda waxa ay leeyihiin nidaam loo canshuuro, reet u degsan iyo tixraac (arag warbixinta).
Al-Shabaab ayaa lagu sheegay warbixinta in ay isticmaasho oo lacagaheeda ku kaydsato bangiyada dalka, markii ay diraysana ku dirsato xawaaladaha dalka. Meelaha canshuuraha ugu badan ay al-Shabaab ka soo galaan ayaa warbixinta lagu sheegay in ay yihiin Xamar iyo Bossaso, ahna labada meelood ee Amniyaatka Al-Shabaab ay ku xoogganyihiin.
Ragga al-Shabaab u qaabilsan dabaggalka lacagta ayaa lagu qiyaasay in kiiba bil walba soo xereeyo $50,000, mana jiro nin awooda in uu lacagtaas la fakado. Waa mar e 24ka saac waxaa raggaas waardiye ka haya Amniyaatka al-Shabaab. Waa mar kale xafiisyada ay ka hawlgalaan oo u eg xafiisyo caadi ah waxaa mid walba dhex fadhiya ugu yaraan 4 Amniyaatka ah. Intaas kaliya ma aha e mid kasta bil markii uu joogo ayaa shaqada laga fasaxaa oo mid kale la keena, asna meel kale iyo hawl kale loo wareejiyaa.
Warbixinta oo dhammaystiran HALKAN RIIX oo kaga bogo.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18333
Madaxda iyo Shaqaalaha Xoogga Korontada Eeneye oo tacsi diraya
Ha moogaan KFC Garoowe!